Isifundo sevidiyo: Isiphumo esiphantsi sePoly kwiAdobe Photoshop, kulula kwaye sikhawuleza | Izidalwa ezikwi-Intanethi
Isifundo sevidiyo: Isiphumo esiphantsi sePoly kwi-Adobe Photoshop, kulula kwaye siyakhawuleza
Iziphumo I-poly ephantsi Yenye yezona zisetyenziswa kakhulu kuqulunqo lwekamva kunye nobuncinci. Ngokuqinisekileyo ukhe wayibona ngaxesha lithile kwaye ububukele ukugqibelela kokugqitywa kwejiyometri kumacala omlinganiswa okanye nakweyiphi na imeko. Esi siphumo sesona sicacileyo nesichanekileyo sokubonisa uPicasso okanye uBraque's cubism kwihlabathi lama-XNUMX lenkulungwane kwaye linokwenziwa ngeendlela ezahlukeneyo kunye nezicelo ezahlukeneyo ezinje ngeAdobe Photoshop okanye i-Illustrator. Kule meko siza kuyibona ngesicelo seAdobe Photoshop.
Nangona inokubonakala ngathi iyindlela entsonkothileyo, inyani kukuba akukho nto inzima ngayo, nangona ifuna ukuzinikezela kunye nexesha elithile. Amanyathelo asisiseko esiya kuwalandela aya kuba zezi zilandelayo, qaphela!
Siza kwenza isikhokelo yahlula ubuso isimilo sethu ngesiqingatha saso.
Siza kunika umfanekiso wethu umahluko ngakumbi kunye nobulukhuni xa kukho imfuneko.
Siza kukhetha isixhobo se-lasso polygonal kwaye senze ukhetho olunemilo engunxantathu ebusweni bomlinganiswa.
Siza kuya kwimenyu Icebo lokucoca ulwelo> Blur> Umndilili.
Siza kuphinda amanyathelo amabini okugqibela aphindaphindiweyo nangona siza kuwenza ngeendlela ezimfutshane.
Ukufaka umndilili siza kucinezela a Ctrl / Ctmd + F kunye nokukhetha Ctrl / Cmd + D.
Xa sisenza isiqingatha sobuso bethu siya kukhetha kwaye siphindaphinde koluhlu olutsha ngeCtrl / Cmd + J.
Siza kucinezela a Ctrl / Cmd + T. kwaye siya kudlala ngokuthe tyaba.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukudala kwi-intanethi » Izixhobo zoYilo » Photoshop » Isifundo sevidiyo: Isiphumo esiphantsi sePoly kwi-Adobe Photoshop, kulula kwaye siyakhawuleza
Iiplagi ezili-10 ezinomdla kakhulu zeAdobe Illustrator
+ 20 Izixhobo zasentwasahlobo zasimahla zaBaqulunqi